(Emelitere ikpeazụ On: 20/09/2021)
Noravank bụ otu n'ime ndị kasị akụkọ ihe mere eme na iconic mọnk okụre na Vayots Dzor ógbè. Oké nkume dị nkọ gbara ụka gburugburu, na ịrịba ama mma bụ otu nke kasị mma ihe inyocha Armenia. The akụkọ ihe mere eme Noravank e wuru na na 13nke na narị afọ na-esi "New Obibi" na Armenian. Ebe obibi ndị mọnk ghọrọ a na omenala na izi center nke Armenia.
Tatev bụ otu n'ime ihe ọla-Armenian ije. E wuru ebe obibi ndị mọnk na 9th-13th century ọ bụ ebe mmụta ma nwee uru akụkọ ihe mere eme maka akụkọ Armenia. The aha nke ebe obibi ndị mọnk nwere ihe na-akpali si. E nwere a mma na touchy akụkọ banyere ndị nna ha ukwu, bụ onye wuru ebe obibi ndị mọnk. Ọ dị njikere ịhụ ya masterpiece si na mbara igwe na-achọ inwere nwere nku jụrụ Chineke na-enye ya nku.
Sagrada Familia bụ kasị gara iconic chọọchị na Spain. Construction nke ncheta eze malitere na 1882. Architect Francisco de Paula del Villar was designed in a classic Gothic style. ma, na 1883 Antoni Gaudi gbanwere ọrụ wee wuo ụlọ ụlọ ọgbara nke a ma ama n'ụwa. Construction ike ga-agwụ agwụ na 2026, maka centenary nke Antoni Gaudi ọnwụ.
The-atụpụta ụkpụrụ ụlọ zubere na-ewu 12 elu, raara Jizọs Kraịst na-eso Ụzọ, otu nye nne Jizọs, anọ na-echeta na ozioma. Ugbu, dechara asatọ elu. Inside ụka, Gaudi chepụtara ogidi ndị ahụ n'ụdị ogwe osisi dị gịrịgịrị nke na -eme ụdị ọhịa. Site n'elu ụlọ nsọ, ị pụrụ ịhụ nnukwu echiche nke obodo.
Stave ụka bụ akara ngosi kacha dị egwu na Norway. Ọ na-wuru na 1180 na a raara nye Onyeozi Andrew. Ụdị ụlọ ụka ndị a bụ ihe ncheta kacha mkpa maka ihe owuwu ụlọ Norway. Ụfọdụ n'ime ya siri àgwà bụ extravagantly pịrị portals na obe na carvings nke dragọn ahụ si isi na n'elu ụlọ. Nke a style gbasara na Scandinavia na-eji na Britain kwa.
Akụkụ ihe nketa akụkọ ihe mere eme gbara gburugburu ebe ahụ. Vindhellavegen ka odude nso chọọchị na-atụ aro mara mma na-eje ije, ohere. Nke a akụkọ ihe mere eme n'okporo ụzọ e ọdịda "Norway kasị mara mma ụzọ" site Norwegian Public Roads Administration na 2014.
Duomo dị na mpaghara ugwu Milan, a kasị katidral bụ otu n'ime ndị kasị dị egwu na mara mma n'ụwa amawo. Onyenwe anyị na Achịbishọp nke Milan chọrọ iwulite ụlọ katidral pụrụ iche nke ahụ ga -eme ka mba ahụ nwee ebube nke Chineke na njikọ obodo. Owuwu nke Duomo gụnyere ndị na -ewu ụlọ, ọrụ nkà, na omenkà si gafee Europe. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ ahụmahụ na ịdị uchu nyeere ike International Gothic Duomo.
Hallgrimskirkja ụka bụ ụlọ kacha elu na nnukwu na Reykjavik a na -ahụkwa ya n'obodo niile. The ụka nwere 74,5 mita elu na njem nleta nwere ike tinye chọọchị na-enwe ụbara echiche. The ụlọ si ewu malitere na 1945 e dechara ya 1986. Chọọchị modernist yiri nke basalt lava na -asọ mgbe lava na -ajụ oyi n'oké nkume.
The ọkpọkọ dịpụrụ adịpụ site na anọ akwụkwọ ntuziaka na a pedal. Enwere 102 n'ohu, 72 akwụsị, na 5275 ọkpọkọ na bụ 15 mita ogologo, tufuo ibu 25 aj u. The ụlọ dị ike na ike nke na-ejuputa nsọ na nnukwu ohere. The ewu nke ngwa chụsịrị na 1992 na e ji mee ihe maka a dịgasị iche iche nke E.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)